Ngoku iWatermark ngqo ngaphakathi kwe-iPhoto kunye neApile yokuKhusela iiFoto zakho usebenzisa iWatermark Pro 1.1 | Plum emangalisayo
Novemba 12, 2011
Ngoku iWatermark ngokuthe ngqo ngaphakathi kwe-iPhoto kunye neApile yokuKhusela iiFoto zakho usebenzisa iWatermark Pro 1.1
UMHLA: Novemba 12, 2011
iWatermark Pro ngoku yongeza i-watermarking ngaphakathi kwe-iPhone kunye neApile. I-iWatermark yeyona Nombolo 1 yokujonga ii-imeyile zeefoto kusetyenziswa iMac, iWindows, i-iPhone / i-iPad kunye ne-Android.
IZIPHUMO EZINTSHA KWI-iWATERMARK PRO 1.1
Ukuhlanganiswa kwe-iPhoto -Ngoku kuphela kwesicelo se-watermarking sokusebenza ngokuthe ngqo kwi-iPhoto nge-plugin. Yenza ii-watermark kwi-iWatermark uze usebenzise ezo watermark ngqo kwi-iPhoto.
Umdibaniso woMdibaniso -Ngoku kuphela kwesicelo se-watermarking sokusebenza ngokuthe ngqo ngaphakathi kuVulo nge-plugin. Yenza ii-watermark kwiWatermark emva koko usebenzise ezo watermark ngqo kwindawo.
AMANQAKU AQHALASEKILEYO KWI-IWATERMARK PRO
Zonke iZikhangeli zeFoto ziyahambelana- Ukongeza ekusebenzeni ngokuthe ngqo kwi-iPhoto ngoku isebenza nazo zonke iibrawuza zeefoto (Lightroom, Aperture, iPhoto, njl.) Njengesicelo esizimeleyo.
Ngokukhawuleza -Ngoku isebenzisa inkqubo ehambelanayo (zonke ii-CPU kunye nee-GPU's) ukukhawulezisa ukujonga enye, amakhulu okanye amawaka eefoto.
Yabelana -Ngoku ikuvumela ukuba uthumele ii-watermark ukuze wabelane ngama-watermark kwezinye iikhomputha zakho okanye kubahlobo kunye nabalingane bakho.
RAW -Ngoku unokufunda iifayile zeefoto zeRAW kuzo zonke iikhamera zamva nje ukongeza kwiJPG yesiqhelo, iPNG, iTIFF, njl njl.
Imethadatha -Ngoku iyafunda kwaye ibhale imethadatha (eyandisiweyo ye-IPTC kunye ne-XMP).
Iikhowudi zeQR -Ngoku unokwenza kunye nokubukela iiwotshi ngeekhowudi zeQR ezinjengeekhowudi zebar ezinolwazi oluninzi (i-imeyile, i-url yewebhusayithi, nantoni na oyifunayo).
I-Creative Commons -Ngoku iqulethe zonke ii-icon ze-Creative Commons / ulwazi ukuze uzisebenzise kwiifoto zokubukela.
Umhleli weWatermark -Yenza isicatshulwa, umzobo, i-QR kunye nee-watermark ze-Creative Commons kwaye uzifomathile ngeefonti ezahlukeneyo, ubukhulu, ii-angles
Iziphumo -Iziphumo ezongezelelekileyo ukongeza kwisithunzi, ulwandlalo, ukrolwa, ukuholwa ngoku kubandakanya ukutshiswa kombala, umbala wedayi, ukujika kunye nezinye ezininzi.
Iimpawu ezininzi zamanzi-Endaweni yento enye ngoku enokongeza ii-watermark ezininzi (isicatshulwa kunye nemizobo) kwiindawo ezahlukeneyo kwifoto ngaxeshanye.
Iimpawu ezintsha -Iimpawu ezintle kunye nemizobo kwisicelo sonke esenziwe ngumyili odumileyo wase-Italiya uMichele Zamparo.
Iziko-ukhetho olutsha lokufomatha. Misela indawo yew watermark ngokutsala kunye nezinye iindlela, ukujonga ngokukhawuleza iplagin, setha imvelaphi kunye nolunye utshintsho oluninzi.
Ilayisensi yelungelo lokushicilela yonke imifanekiso yakho kunye nekhabhathi ebonakalayo ngaphakathi kwemizuzu. I-iWatermark ikuvumela ukuba wongeze i-watermark yakho okanye ishishini kuyo nayiphi na ifoto okanye imizobo. Nje ukuba ifakwe kwifoto le watermark ebonakalayo ibonisa indalo kunye nobunini bakho. Ukujonga ukubonwa kubaluleke kakhulu kwaye njengokutyikitya igama lakho kuxwebhu, ukubonisa ngokufihlakeleyo, nokuba yeyiphi ifoto yakho, yeyakho, kwaye ingasetyenziswa ngaphandle kwemvume yakho. Ukongeza iWatermark inokukhulisa ubungakanani, iphinde yongeze igama, yongeza i-IPTC kunye ne-XMP metadata, yenza izithombisi kunye nokucoca iifoto ezingenayo. I-iWatermark sisixhobo esifanelekileyo sabathathi beefoto nakubani na onekhamera yedijithali, iingcali okanye abaqalayo.
IWatermark Pro yinto ebhalwe ngokutsha kwiWatermark yePlum Amazing. Iphinde yabhalwa ngokutsha kusetyenziswa iitekhnoloji zakutshanje zika-Apple. Uluhlu lomahluko phakathi kweWatermark kunye neWatermark Pro lukwincwadi ye-intanethi apha.
I-iWatermark Pro ye-Mac yenkqubo yesoftware enobuchule bokujonga imifanekiso ebonakalayo kunye neminye imizobo. Ineplagi evumela ukuba isebenze ngqo kwi-iPhoto kunye neApile, kodwa ikwasisicelo sodwa esisebenzayo kuzo zonke iibrawuza zefoto (njengeKhanyiso, iPicasa, njl. Njl. njengepropathi yakho yokuqonda. I-iWatermark Pro ye-Mac ilula kwaye kukuphela kwesicelo esibonakalayo esisebenza kwi-Mac, Windows, iPhone / iPad kunye ne-Android.
Umboniso 3-uMhleli wesi-2
Ngolwazi olongezelelweyo kule software ingentla, nceda undwendwele:
Iingcali zemidiya nceda unxibelelane nathi malunga nekopi yayo nayiphi na isoftware.